(Ministry of Health and Sports, Myanmar)
စစ်တွေနဲ့ ရခိုင်အခြားမြို့တချို့မှာ ပိုးတွေတာ ဆတိုးများလာနေပြီး ဆက်တိုးဖို့လည်းများပေမယ့် ပြင်းထန်မူနည်းသေးကာ ထိထိရောက်ရောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ ပြင်ထားတယ်လို့၊ ရခိုင်ကိုဗစ် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မူ ဗဟိုကွင်းဆင်းအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
စစ်တွေမှာ ဒီတစ်ခေါက် ပိုးစတွေ့ချိန် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် သြဂုတ် (၁၆) ရက်ကစပြီး၊ အထူး စေလွှတ်ခဲ့တဲ့၊ ဒီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းမြင့်ကို ကိုဝင်းမင်းက မေးမြန်းထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းမြင့် ခင်ဗျား ၊ အဓိက ပြည်သူတွေကို အခုအချိန်မှာ ဘာပြောချင်သလဲ။
ဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းမြင့်။ ။ အဓိကအားဖြင့်တော့ Case (ပိုးတွေ့သူ) တွေက အများကြီးဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ လူနာနဲ့ ထိတွေ့တာ Primary contact ပေါ့ အဓိက ထိတွေ့သူ၊ နောက်သူက တဆင့် Secondary Contact လို့ခေါ်တဲ့ ဒုတိယ Contact (ထိတွေ့သူ) တွေကို၊ ကျနော်တို့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ (၁၆) ရက်နေ့ကနေ စပြီးတော့ အခု (၂၆)၊ စစ်တွေရောပေါ့နော်။ ဥပမာဆိုပါတော့ စစ်တွေမှာလာပြီးတော့ မြောက်ဦးကိုပြန်သွားတယ်၊ ဘူးသီးတောင်တို့ဘာတို့ ပြန်သွားတယ်။ အဲဒီလူတွေကိုပါ စစ်ဆေးတာတွေ ကျနော်တို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ (၁၀) ရက် ဝန်းကျင် အတွင်းမှာလည်း လူ ၁၅၀၀ ဆီကနေပြီးတော့ ဓါတ်ခွဲနမူနာ ရယူပြီးတော့ စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဒါ ထပ်ပြီးတော့တော့၊ ဒီလူနာသစ်တွေ့ရှိမူတွေကတော့၊ ဒီအခုလက်ရှိအနေနဲ့ကတော့ ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ အခုလို စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုတွေ များလာတဲ့အပေါ်မှာ ပြည်သူတွေကို အဓိက ဘာပြောချင်သလဲ ဆရာ။
ဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းမြင့်။ ။ သိပ်ပြီးတော့ စိုးရိမ်မှု မလွန်ကဲဖို့ပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ Case (ပိုးတွေ့လူနာ) တွေ့တဲ့ လူတွေထဲမှာ ဆိုရင် ဒီရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့သူတွေကိုပါ လိုက်ရှာပြီးတော့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်တာကြောင့် Case တွေ့တာကတော့ များပြားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Case တွေထဲမှာ ရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့သူ ကတော့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဥပမာ- ရောဂါပြင်းထန်တဲ့သူဆိုရင် သူ့မှာ ဆီးချိုတို့ ၊ သွေးတိုးတို့ ရှိတဲ့လူကလည်း (၉) ယောက်လောက်ပဲရှိပြီးတော့ အားလုံးကလည်း ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ ဒီ ICU အထူးကြပ်မတ်ဆောင်မှာ ထားရှိပြီးတော့ ကုသနေရတဲ့ အခြေအနေမျိုး မရှိဘူးပေါ့နော်။ မရှိတဲ့အတွက် Case တွေကို များများရှာနိုင်ဖို့ ပြည်သူကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ လိုသလို၊ နောက်တခုကတော့ အထူးအနေနဲ့ လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ Strategy ကတော့ ရောဂါပိုးကို တွေ့တဲ့နေရာမှာပဲ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကို ကျနော်တို့ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီတွေ့ရှိတဲ့ လူနာတွေကို ဆေးရုံတွေမှာ Isolation Ward (သီးသန်းဆောင်) မှာ သီးသန့်ထားရှိပြီးတော့ ကုသလျက် ရှိပါတယ်။ ဒီလိုကုသနိုင်ဖို့ကလည်း စစ်တွေဆေးရုံ ၊ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းတို့၊ တိုင်းရင်းဆေးရုံ အဲဒီမှာ ကုသဖို့အတွက်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ဒီလို လူနာတွေ့ရှိမှုတွေကို စနစ်တကျ ကူးစက်ဗေဒဆိုင်ရာ ဒီသုံးသပ်မူတွေ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့၊ ဒါ့အပြင် တွေ့ရှိလူနာတွေကိုလည်း စနစ်တကျ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့ အတွက်ကို၊ တခြားပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတွေမှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ထားရှိပြီးတော့ ကုသလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ဒီရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် အဓိကအရေးကြီးတာကတော့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာ ၊ အဓိကအားဖြင့်ကတော့ အကုန်လုံးသိရှိပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် Mask (မျက်နှာနဲ့နှာခေါင်းစီး) ကို စနစ်တကျ တပ်ဆင်ဖို့ရယ်၊ နောက်တခုကတော့ လက်ဆေးဖို့ရယ်ပေါ့နော် အဲဒါတွေကို ကျနော်တို့ ရောက်တဲ့ ၁၆ ရက်နေ့တုန်းကဆိုရင် စစ်တွေမြို့မှာ Mask ကို အများစု မတပ်တာတွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျန်းမာရေးပညာပေးလုပ်ငန်းကို တနေ့ ၅ ကြိမ် Speaker နဲ့ရော တခြားနည်းတွေနဲ့ရော ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ Mask တပ်တာတွေတို့ လိုက်နာတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပိုပြီးတော့ အားကောင်းလာတာတွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူနာနဲ့ ထိတွေ့သူတွေကို အသွားအလာ ကန့်သတ်တာတွေကိုလည်း လိုက်နာပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်း အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒီအခြေအနေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အရှေ့မှာ ဘာတွေထပ်လုပ်ဖို့ ရှိဦးမလဲ။
ဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းမြင့်။ ။ အဓိကတော့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ များများစစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက်။ ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ အုပ်စုတွေမကဘူး၊ ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးတဲ့ အုပ်စုတွေမှာပါ စစ်ဆေးဖို့ အတွက် အစီအစဉ်ချပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Random Sampling (ရှောင်တခင် စစ်ဆေးတဲ့) အနေနဲ့ စစ်တွေဈေးတို့ နောက်တခုက အသွားအလာများတဲ့နေရာတွေပေ့ါ ဥပမာ ဘဏ်တွေတို့ အဲလိုဟာမျိုးတွေမှာ စစ်ဆေးဖို့ရယ်။ နောက် ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကတော့ အကုန်လုံးထိတွေ့တဲ့လူတွေရော အပါအ၀င်ပေါ့နော် တခြားကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ စစ်ဆေးတာရှိပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ IDP စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာရော ။
ဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းမြင့်။ ။ IDP စခန်းတွေမှာလည်း UN (ကုလသမဂ္ဂ) တို့ INGO (နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်တံအဖွဲ့) တို့က တချို. Positive (ပိုးတွေ့တာ) ဖြစ်တဲ့ လူနာတွေနဲ့ ထိတွေ့တဲ့ IDP စခန်းကလူတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ စစ်ဆေးတာရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် IDP စခန်းတွေကို မကူးစက်အောင်အတွက်၊ IDP စခန်းတွေကို သွားရောက်မယ့် INGO ၀န်ထမ်းတွေ၊ UN ၀န်ထမ်းတွေကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပြီးတော့ ပိုးမတွေ့မှပဲ သွားရောက်ဖို့ အဲဒါမျိုးတွေလည်း ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ IDP စခန်းတွေမှာ အခုအချိန်ထိက ပိုးတွေ့တာမရှိသေးဘူးပေါ့နော် ဒီ မြို့က IDP စခန်းဖွင့်ထားတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာရော။
ဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းမြင့်။ ။ IDP မှာတော့ လက်ရှိအနေနဲ့ ဖြစ်တာမရှိသေးပါဘူး။ တခု ကျနော်တို့ Case တွေ့တာ တခုဆိုရင်လည်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ဘုန်းတော်ကြီး ၆ ပါးလောက် ကျနော်တို့ Case တွေ့တာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကလည်း စစ်ဘေးရှောင် လက်ခံထားတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်။ အဓိကတော့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေအတွက်ကတော့ အခု COVID ဖြစ်တဲ့အချိန်တင်မဟုတ်ဘူး တခြားထူးခြားဖြစ်စဉ်ရော၊ ကူးစက်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်စဉ်တွေအတွက်ရော သိနိုင်ဖို့အတွက် Early Warning System (တင်ကြိုအချက်ပြသတိပေးစနစ်) တွေရောကို Electronically (လျှပ်စစ်ကွန်ပြူတာစနစ်နဲ့) ရော၊ ဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်။ အဲဒီကနေ ချက်ချင်း သတင်းပေးပို့ပြီးတော့ ဥပမာ COVID-19 နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ Symptom (လက္ခဏာ) တွေရှိတယ်ဆိုရင်၊ ချက်ချင်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းရှိတယ်။ နောက်တခုကတော့ IDP စခန်းတွေအတွက်ဆိုရင် အဓိကအားဖြင့် Hand Wash (လက်ဆေးတာ) တို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ၊ အဲဒါတွေကတော့ ကျနော်တို့ IDP Camp (စစ်ရှောင်စခန်း) တွေကို ကျနော်တို့ Target (အဓိကပစ်မှတ်) ထားပြီးဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာရေ အခုဒီ ပိုးကူးစက်မှု များနေတဲ့အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် အနေအထားကိုရော။
ဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းမြင့်။ ။ ဒီဖြစ်စဉ်က ဘယ်လောက်အထိ၊ ဘယ်နှစ်ယောက် ကူးစက်သွားမယ်၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို၊ ကျနော်တို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ကနေပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေရော၊ တခြားသက်ဆိုင်တဲ့ ဌာနတွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရော၊ နောက်တခုက ပြည်သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရော၊ နောက်တခုက UN ၊ INGO အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရော အဲလိုမျိုး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့၊ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မြန်မြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာ ကျေးဇူးပါ။
ရခိုငျကိုဗဈ အရေးပျေါတုံ့ပွနျမှု ဗဟိုကှငျးဆငျးအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျနဲ့ ဆကျသှယျမေးမွနျးခကျြ
စဈတှနေဲ့ ရခိုငျအခွားမွို့တခြို့မှာ ပိုးတှတော ဆတိုးမြားလာနပွေီး ဆကျတိုးဖို့လညျးမြားပမေယျ့ ပွငျးထနျမူနညျးသေးကာ ထိထိရောကျရောကျထိနျးခြုပျဖို့ ပွငျထားတယျလို့၊ ရခိုငျကိုဗဈ အရေးပျေါတုံ့ပွနျမူ ဗဟိုကှငျးဆငျးအဖှဲ့က ဆိုပါတယျ။
စဈတှမှော ဒီတဈခေါကျ ပိုးစတှခြေိ့နျ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျ သွဂုတျ (၁၆) ရကျကစပွီး၊ အထူး စလှေတျခဲ့တဲ့၊ ဒီအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ ဒေါကျတာ ဉာဏျဝငျးမွငျ့ကို ကိုဝငျးမငျးက မေးမွနျးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဒေါကျတာ ဉာဏျဝငျးမွငျ့ ခငျဗြား ၊ အဓိက ပွညျသူတှကေို အခုအခြိနျမှာ ဘာပွောခငျြသလဲ။
ဒေါကျတာ ဉာဏျဝငျးမွငျ့။ ။ အဓိကအားဖွငျ့တော့ Case (ပိုးတှေသေူ့) တှကေ အမြားကွီးဖွဈရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကတော့ လူနာနဲ့ ထိတှတေ့ာ Primary contact ပေါ့ အဓိက ထိတှသေူ့၊ နောကျသူက တဆငျ့ Secondary Contact လို့ချေါတဲ့ ဒုတိယ Contact (ထိတှသေူ့) တှကေို၊ ကနြျောတို့ရှာလိုကျတဲ့အခါမှာ (၁၆) ရကျနကေ့နေ စပွီးတော့ အခု (၂၆)၊ စဈတှရေောပေါ့နျော။ ဥပမာဆိုပါတော့ စဈတှမှောလာပွီးတော့ မွောကျဦးကိုပွနျသှားတယျ၊ ဘူးသီးတောငျတို့ဘာတို့ ပွနျသှားတယျ။ အဲဒီလူတှကေိုပါ စဈဆေးတာတှေ ကနြျောတို့ လုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒီ (၁၀) ရကျ ဝနျးကငျြ အတှငျးမှာလညျး လူ ၁၅၀၀ ဆီကနပွေီးတော့ ဓါတျခှဲနမူနာ ရယူပွီးတော့ စဈဆေးခဲ့ပါတယျ။ ဆကျလကျပွီးတော့ ဒါ ထပျပွီးတော့တော့၊ ဒီလူနာသဈတှရှေိ့မူတှကေတော့၊ ဒီအခုလကျရှိအနနေဲ့ကတော့ ရှိနဦေးမှာဖွဈပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဟုတျကဲ့ ဆရာ အခုလို စဈဆေးတှရှေိ့မှုတှေ မြားလာတဲ့အပျေါမှာ ပွညျသူတှကေို အဓိက ဘာပွောခငျြသလဲ ဆရာ။
ဒေါကျတာ ဉာဏျဝငျးမွငျ့။ ။ သိပျပွီးတော့ စိုးရိမျမှု မလှနျကဲဖို့ပေါ့နျော။ ကနြျောတို့ Case (ပိုးတှလေူ့နာ) တှတေဲ့ လူတှထေဲမှာ ဆိုရငျ ဒီရောဂါလက်ခဏာမပွတဲ့သူတှကေိုပါ လိုကျရှာပွီးတော့ ဓါတျခှဲစမျးသပျတာကွောငျ့ Case တှတေ့ာကတော့ မြားပွားတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ Case တှထေဲမှာ ရောဂါလက်ခဏာပွတဲ့သူ ကတော့ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျပဲ ရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဥပမာ- ရောဂါပွငျးထနျတဲ့သူဆိုရငျ သူ့မှာ ဆီးခြိုတို့ ၊ သှေးတိုးတို့ ရှိတဲ့လူကလညျး (၉) ယောကျလောကျပဲရှိပွီးတော့ အားလုံးကလညျး ရောဂါပွငျးထနျတဲ့ ဒီ ICU အထူးကွပျမတျဆောငျမှာ ထားရှိပွီးတော့ ကုသနရေတဲ့ အခွအေနမြေိုး မရှိဘူးပေါ့နျော။ မရှိတဲ့အတှကျ Case တှကေို မြားမြားရှာနိုငျဖို့ ပွညျသူကလညျး ပူးပေါငျးပါဝငျဖို့ လိုသလို၊ နောကျတခုကတော့ အထူးအနနေဲ့ လကျရှိကငျြ့သုံးနတေဲ့ Strategy ကတော့ ရောဂါပိုးကို တှတေဲ့နရောမှာပဲ ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့အတှကျကို ကနြျောတို့ ဦးစားပေးဆောငျရှကျတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒီတှရှေိ့တဲ့ လူနာတှကေို ဆေးရုံတှမှော Isolation Ward (သီးသနျးဆောငျ) မှာ သီးသနျ့ထားရှိပွီးတော့ ကုသလကျြ ရှိပါတယျ။ ဒီလိုကုသနိုငျဖို့ကလညျး စဈတှဆေေးရုံ ၊ သူနာပွုသငျတနျးကြောငျးတို့၊ တိုငျးရငျးဆေးရုံ အဲဒီမှာ ကုသဖို့အတှကျလညျး ဆောငျရှကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
ဒီလို လူနာတှရှေိ့မှုတှကေို စနဈတကြ ကူးစကျဗဒေဆိုငျရာ ဒီသုံးသပျမူတှေ ဆောငျရှကျနိုငျဖို့၊ ဒါ့အပွငျ တှရှေိ့လူနာတှကေိုလညျး စနဈတကြ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှုပေးနိုငျဖို့ အတှကျကို၊ တခွားပွညျနယျနဲ့ တိုငျးတှမှောရှိတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေိုလညျး ထားရှိပွီးတော့ ကုသလကျြရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပွညျသူလူထုအနနေဲ့ ဒီရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျဖို့အတှကျ အဓိကအရေးကွီးတာကတော့၊ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့နဲ့ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးမှာရှိတဲ့ လူမှုရေးအသငျးအဖှဲ့တှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီးတော့၊ ကနျြးမာရေးအသိပညာ ၊ အဓိကအားဖွငျ့ကတော့ အကုနျလုံးသိရှိပွီးတဲ့အတိုငျးပေါ့နျော Mask (မကျြနှာနဲ့နှာခေါငျးစီး) ကို စနဈတကြ တပျဆငျဖို့ရယျ၊ နောကျတခုကတော့ လကျဆေးဖို့ရယျပေါ့နျော အဲဒါတှကေို ကနြျောတို့ ရောကျတဲ့ ၁၆ ရကျနတေု့နျးကဆိုရငျ စဈတှမွေို့မှာ Mask ကို အမြားစု မတပျတာတှရေ့တယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ အခုနောကျပိုငျးမှာ ကနျြးမာရေးပညာပေးလုပျငနျးကို တနေ့ ၅ ကွိမျ Speaker နဲ့ရော တခွားနညျးတှနေဲ့ရော ဆောငျရှကျတဲ့အတှကျ ပွညျသူလူထုအနနေဲ့ Mask တပျတာတှတေို့ လိုကျနာတဲ့ အခကျြအလကျတှေ ပိုပွီးတော့ အားကောငျးလာတာတှရှေိ့ရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ လူနာနဲ့ ထိတှသေူ့တှကေို အသှားအလာ ကနျ့သတျတာတှကေိုလညျး လိုကျနာပွီးတော့ ဆောငျရှကျဖို့ကလညျး အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဟုတျကဲ့ဆရာ ဒီအခွအေနကေို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ အရှမှေ့ာ ဘာတှထေပျလုပျဖို့ ရှိဦးမလဲ။
ဒေါကျတာ ဉာဏျဝငျးမွငျ့။ ။ အဓိကတော့ ဓါတျခှဲစမျးသပျတဲ့အခါမှာ မြားမြားစဈဆေးနိုငျဖို့အတှကျ။ ရောဂါဖွဈနိုငျခွမြေားတဲ့ အုပျစုတှမေကဘူး၊ ရောဂါဖွဈနိုငျခွနေညျးပါးတဲ့ အုပျစုတှမှောပါ စဈဆေးဖို့ အတှကျ အစီအစဉျခပြွီးတော့ ဆောငျရှကျထားတာဖွဈပါတယျ။ ကနြျောတို့ Random Sampling (ရှောငျတခငျ စဈဆေးတဲ့) အနနေဲ့ စဈတှဈေေးတို့ နောကျတခုက အသှားအလာမြားတဲ့နရောတှပေေ့ါ ဥပမာ ဘဏျတှတေို့ အဲလိုဟာမြိုးတှမှော စဈဆေးဖို့ရယျ။ နောကျ ဆေးရုံဝနျထမျးတှကေတော့ အကုနျလုံးထိတှတေဲ့လူတှရေော အပါအဝငျပေါ့နျော တခွားကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေိုလညျး ကနြျောတို့ စဈဆေးတာရှိပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဟုတျကဲ့ IDP စဈဘေးရှောငျစခနျးတှမှောရော ။
ဒေါကျတာ ဉာဏျဝငျးမွငျ့။ ။ IDP စခနျးတှမှောလညျး UN (ကုလသမဂ်ဂ) တို့ INGO (နိုငျငံတကာအစိုးရမဟုတျတံအဖှဲ့) တို့က တခြို. Positive (ပိုးတှတေ့ာ) ဖွဈတဲ့ လူနာတှနေဲ့ ထိတှတေဲ့ IDP စခနျးကလူတှကေိုလညျး ကနြျောတို့ စဈဆေးတာရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ IDP စခနျးတှကေို မကူးစကျအောငျအတှကျ၊ IDP စခနျးတှကေို သှားရောကျမယျ့ INGO ဝနျထမျးတှေ၊ UN ဝနျထမျးတှကေို ကနျြးမာရေး စဈဆေးပွီးတော့ ပိုးမတှမှေ့ပဲ သှားရောကျဖို့ အဲဒါမြိုးတှလေညျး ဆောငျရှကျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဟုတျကဲ့ဆရာ IDP စခနျးတှမှော အခုအခြိနျထိက ပိုးတှတေ့ာမရှိသေးဘူးပေါ့နျော ဒီ မွို့က IDP စခနျးဖှငျ့ထားတဲ့ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှမှောရော။
ဒေါကျတာ ဉာဏျဝငျးမွငျ့။ ။ IDP မှာတော့ လကျရှိအနနေဲ့ ဖွဈတာမရှိသေးပါဘူး။ တခု ကနြျောတို့ Case တှတေ့ာ တခုဆိုရငျလညျး ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတဈကြောငျးမှာ ဘုနျးတျောကွီး ၆ ပါးလောကျ ကနြျောတို့ Case တှတေ့ာလေးတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးကလညျး စဈဘေးရှောငျ လကျခံထားတဲ့ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးမဟုတျတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့ပေါ့နျော။ အဓိကတော့ စဈဘေးရှောငျစခနျးတှအေတှကျကတော့ အခု COVID ဖွဈတဲ့အခြိနျတငျမဟုတျဘူး တခွားထူးခွားဖွဈစဉျရော၊ ကူးစကျရောဂါနဲ့ ပတျသကျပွီး ဖွဈစဉျတှအေတှကျရော သိနိုငျဖို့အတှကျ Early Warning System (တငျကွိုအခကျြပွသတိပေးစနဈ) တှရေောကို Electronically (လြှပျစဈကှနျပွူတာစနဈနဲ့) ရော၊ ဆောငျရှကျထားတာရှိပါတယျ။ အဲဒီကနေ ခကျြခငျြး သတငျးပေးပို့ပွီးတော့ ဥပမာ COVID-19 နဲ့ ဆကျစပျတဲ့ Symptom (လက်ခဏာ) တှရှေိတယျဆိုရငျ၊ ခကျြခငျြး စဈဆေးဆောငျရှကျနိုငျဖို့အတှကျလညျးရှိတယျ။ နောကျတခုကတော့ IDP စခနျးတှအေတှကျဆိုရငျ အဓိကအားဖွငျ့ Hand Wash (လကျဆေးတာ) တို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး အသိပညာပေးလုပျငနျးတှေ၊ အဲဒါတှကေတော့ ကနြျောတို့ IDP Camp (စဈရှောငျစခနျး) တှကေို ကနြျောတို့ Target (အဓိကပဈမှတျ) ထားပွီးဆောငျရှကျနတောတှရှေိပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဟုတျကဲ့ဆရာရေ အခုဒီ ပိုးကူးစကျမှု မြားနတေဲ့အခွအေနကေို ထိနျးခြုပျနိုငျမယျ့ အနအေထားကိုရော။
ဒေါကျတာ ဉာဏျဝငျးမွငျ့။ ။ ဒီဖွဈစဉျက ဘယျလောကျအထိ၊ ဘယျနှဈယောကျ ကူးစကျသှားမယျ၊ ဘယျလောကျကွာကွာဖွဈမယျဆိုတာကို၊ ကနြျောတို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန ကနပွေီးတော့ ဆောငျရှကျခကျြတှရေော၊ တခွားသကျဆိုငျတဲ့ ဌာနတှေ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုရော၊ နောကျတခုက ပွညျသူတှရေဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုရော၊ နောကျတခုက UN ၊ INGO အဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုရော အဲလိုမြိုး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမယျဆိုရငျတော့၊ အခြိနျတိုတိုအတှငျးမှာ ထိနျးခြုပျဆောငျရှကျသှားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဟုတျကဲ့ မွနျမွနျထိနျးခြုပျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျဆရာ ကြေးဇူးပါ။